दोहोरो अंकले घटेको नेप्से परिसूचक ११३६.९६ विन्दुमा, २१ करोड ८६ लाखको कारोबार
असोज २७, काठमाडौं । सोमवार नेप्से परिसूचक १२ दशमलव शून्य ५ अंक घटेर १ हजार १३६ दशमलव ९६ विन्दुमा आइपुगेको छ । यस दिन १ हजार १४९ दशमलव शून्य १ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक कारोबारको पहिलो आधा घण्टाको समयावधिमा ११५० को विन्दु वरिपरि रहेको थियो । तत्पश्चात ओरालो लाग्ने क्रममा बजार गत कारोबार दिनको परिसूचकको तुलनामा १ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत घटेर बन्द भएको छ ।
यस दिन कारोबारमा आएका १२ समूहमध्ये म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचक घटेर बन्द हुँदा समग्र नेप्से परिसूचक ओरालो लागेको हो । सोमवारको कारोबारमा होटल समूहको परिसूचक सर्वाधिक २ दशमलव ९१ प्रतिशत घटेर बन्द भएको छ भने बैंंकिङ समूहको परिसूचक १ दशमलव २७ प्रतिशत घटेको छ । यस्तै वित्त समूहको परिसूचक १ दशमलव १ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक १ दशमलव १६ प्रतिशत घटेको छ । व्यापार, विकास बैंक, जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, ‘अन्य’, लघुवित्त र जीवन बीमा समूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा कम घटेका छन् । म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक भने शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशत बढेको छ ।
सोमवार रू. २१ करोड ८६ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यो अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ३ दशमलव ४२ गुणा बढी हो । गत कारोबार दिन बिहीवार रू. ६ करोड ३८ लाख रकम बराबरको कारोबार भएको थियो । सेन्सेटिभ इन्डेक्स भने यस दिन २ दशमलव ७६ अंक घटेर २४९ दशमलव १७ विन्दुमा बन्द भएको छ ।
राधी विद्युतको शेयरमूल्य सर्वाधिक बढ्यो
सोमवार राधी विद्युत कम्पनीको शेयरमूल्य ५ दशमलव ८४ प्रतिशत बढेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्यमा प्रतिकित्ता रू. ८ ले वृद्धि भई अन्तिम शेयरमूल्य रू. १४५ रहेको छ । यस्तै दोस्रोमा हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको शेयरमूल्यमा ४ दशमलव ५१ प्रतिशत वृद्धि हुँदा प्रतिकित्ता शेयरमूल्यमा रू. ६ ले बढेको छ । कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १३९ रहेको छ । शेयरमूल्य घटेर कारोबार हुनेहरुमा सिनर्जी पावर डेभलपमेन्टको शेयरमूल्य ६ दशमलव ४९ प्रतिशत घटेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्यमा रू. ५ ले घटेर अन्तिम शेयरमूल्य रू. ७२ मा सिमित भएको छ । यस्तै अरुण कावेली पावर कम्पनीको शेयरमूल्य ५ दशमलव ६३ प्रतिशत घटेर अन्तिम शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १३४ कायम रहेको छ ।
१२ समूहको परिसूचक
सोमवार प्रभु बैंकको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । कम्पनीको ९९ हजार ४४४ कित्ता शेयरको खरीदविक्री हुँदा रू. २ करोड ६५ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. २६६ कायम रहेको छ । कारोबार रकमकै आधारमा दोस्रोमा सिद्धार्थ बैंकको रू. २ करोड ६४ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य रू. ३३७ पुगेको छ ।
यस दिन कारोबारमा आएका १५४ कम्पनीमा २३ कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको छ भने १११ कम्पनीको घटेको छ । साथै, २० कम्पनीको शेयरमूल्य भने स्थिर रहेको छ ।